Faahfaahin Bixiyeyaasha Mashiinka iyo Warshad - Shiinaha Soosaarayaasha Mashiinka Faahfaahsan
Dambiisha-xidhkii PP-xidhkii Mashiinka Mashiinka Kulul
Waa mashiin goyn kulul oo loogu talagalay sameynta bacaha la tolay ee loo yaqaan 'PP', waxay qaadataa siligga kuleylka kululeeyaha iska caabinta si loo gooyo dharka loo yaqaan 'PP' oo loo kala googooyo.
Dambiishanno PP-xidhkii Mashiinka Goynta Cold
Waa mashiin goyn qabow ah oo loogu talagalay sameynta bacaha la tolay ee loo yaqaan 'PP', waxay qaadataa mindi jarjar ah si loo gooyo dharka loo yaqaan 'PP' oo loo kala googooyo.
Mashiinka mashiinka jarista mesh (jarista kulul) waxaa lagu soo saaray tiknoolajiyad badan oo casri ah, qalab toos ah oo loo adeegsado, quudinta otomaatiga ah, goynta kulul iyo tirinta otomaatiga ah iwm.
Waa pp tolmo makiinado tolidda mashiinka, tolida hoose ee qaybaha PP dhar si ay u qaabeeyaan bacaha. Baaxadda ay u leedahay codsiga: bacaha waraaqda ah ee kraft, bacda bacriminta, bacaha daabacaadda midabka, bacaha isku dhafka ah, bacaha kiimikada, bacaha bur, bacaha bariiska, bacaha quudinta iyo bacaha kale ee tolmo wanaagsan leh iwm.
Waxaa si fiican loogu yaqaanaa mashiinka daabacaadda ee jilicsan ama bacda mashiinka daabacaadda ee bacda loogu talagalay bacda dharka leh, waxay daabacan kartaa bacaha waraaqaha, bacda bacriminta, bacaha isku dhafan, bacaha kiimikada, bacaha bur, bacaha bariiska, bacaha quudinta iyo bacaha kale ee tolmo wanaagsan leh iwm.
Mashiinka Daabacaadda Hore iyo Dib
Waxaa si fiican loo yaqaan mashiinka daabacaadda flexo ama bacda mashiinka daabacaadda ee bacda loogu talagalay bacda PP-ga leh, waa bacaha daabacaadda badeecadayada hore iyo gadaal hal mar, laba dhinac oo wadajir ah. Waxay daabacan kartaa bacaha waraaqda ah, bacaha bacriminta, bacaha isku dhafan, bacaha kiimikada, bacaha burka, bacaha bariiska iyo bacaha quudinta iwm.
Dambiisha-xidhkii PP-xidhkii Mashiinka Uruurinta
Waa mashiin caawiya oo ka mid ah PP bacda leh tolmo wanaagsan leh mashiinka daabacaadda, waxaa loo isticmaali karaa ururinta bacaha ka dib daabacaadda. Waxay ka kooban tahay laba qaybood, qayb ururin iyo qayb is dulsaaran.
Boorsooyinka bacaha waa shey u dhigma oo ka mid ah mashiinada bacaha leh ee shirkadahayada leh. Waxaa si gaar ah loogu talagalay xawaaraha xirxirida buuga gacanta ee gudaha iyo dibaddaba.
Dambiishanno PP-xidhkii Xiray Xiinka Xiinka Mashiinka
Mashiinka wax lagu xiro Xiinka waa shey u dhigma oo ka mid ah mashiinada bacaha lagu xidho ee shirkadayada.Waxay ku habboon tahay 35% ka kooban waxyaabaha isku dhafan ee dabiiciga ah ee loo yaqaan 'nylon synthetic', dharka la tolay, dharka aan tolnayn, TC, TR, PP, PU, ​​PVC, PE + aluminium, PE + warqad, ku buufin suufka xabagta iyo qaybta khafiifka ah ee kuleylka kuleylka iwm.
Mashiinka Mashiinka Goynta & Toosinta
Bacda-xidhxidhan PP Mashiinka Sameynta Mashiinka, goynta iyo tolidda. Waa mashiin isku dhafan oo isku dhafan mashiinka jarista iyo mashiinka tolida. Waxay badbaadisaa foosha waxayna ka dhigtaa bacaha si fudud u soo saaraya.
Automatic Goynta Oo Daabacaadda Machine
Bacda-xidhxidhka ah PP Mashiinka Sameynta Mashiinka, goynta iyo daabacaadda. Waa mashiin isku dhafan oo isku dhafan mashiinka jarista iyo mashiinka wax daabaca. Waxay badbaadisaa foosha waxayna ka dhigtaa bacaha si fudud u soo saaraya.
Qalabka Mashiinka & Isku-darka Tooska ah & Mashiinka Isku-dhafan ee Mashiinka
Boorsooyinka pP-ga lagu xidho mashiinka samaynta, goynta, tolida iyo dhalaalka kulul. Waa mashiin isku dhafan oo ah mashiinka jarista, mashiinka tolida iyo mashiinka dhalaalaya kulul. Waxay badbaadisaa foosha waxayna ka dhigtaa bacaha si fudud u soo saaraya. Waxay ku habboon tahay bacaha daabacaadda BOPP, boorsooyinka filimada luul iyo waraaqaha baakadaha isku dhafan ee waraaqaha ah iwm.